JAMHUURIYAA OO KA BIYADIIDAY DHAARTA KOMISHANKA DOORASHOOYINKA. by Mohamed Mousa « SAWNEWS NETWORK
« Boorama: Baahiyaha taagan iyo ballan-qaad aan dhammaan by: Barkhad M. Kaariye – Warbixin
Wasiirka Arr. dibada Somaliland oo Sheegay in Safaarad Buuxda laga dhigay Xafiiska Itoobiya ee Hargeysa »
JAMHUURIYAA OO KA BIYADIIDAY DHAARTA KOMISHANKA DOORASHOOYINKA. by Mohamed Mousa
Jamhuuriya waxay ku tilmaamtay dhaarta lagu dhaariyay Komishanka Doorashooyinka in ay tahay qalad. Waxay sheegtay in ay jiraan laba dhaarood. Ta hore waxay tidhi waxa lagu dhaariyaa Madaxweynaha, Madaxweyne ku xigeenka, iyo masuuliyiinta kale ee qaranka. Ta labaadna waxay sheegtay in lagu dhaariyu Komishanka Doorashooyinka. Waxa kale oo ay Jamhuuriya ku sheegtay dhaartaas mid guracan oon ahayn sharci. Waxay markiiba weerar ku qaaday Gudoomiya Maxkamada Sare oo ay ku tilmaamtay in aanay marin Xubnaha Komishanka Doorashooyinka dhaar sharci ah.
ILAAHAY WAA WAAXID, QURAANKUNA WAA MID KALIYA.
Marka si fiican loo akhriyo ee laga bogto maqaalka cinwaankiisu yahay: Komishanka Qaranka oo loo Dhaariyey Qaab aan Waafaqsanayn Xeerka Doorashooyinka waxa la arki karaa in Jamhuuriya ay had iyo jeerba dhex dhigto ummada shiki, xumaan iyo qas. Markaad u fiirsato maqaalkaas waxad fahmi karta nuxurkiisa iyo ujeedada Jamhuuriya.
Dhaarta ILAAHAY IYO QURAANKIISA lagugu dhaario waa mid kaliya si kastaba ha loo dhige e. Dhaarta labadaas lagu xuso wax ka wayni ma jiraan waana mid circa iyo dhulkuba diideen. Haseyeeshe xumaanta joogtada ah ee Jamhuuriya dalka ka dhex wado waa mid ilaahay laga hoos galo. Waxaa layaab leh sida Jamhuuriya u qaloocinayso runta ee ay uga dhigayso been. Jamhuuriya waxay had iyo jeerba isku daydaa in ay ummada masxada ka maydho oo ay ku abuurto xumaan. Qof kasta oo ilaahay, Nabigeena suuban (SCW), iyo Quraanka kariimka ah aaminsani uu garan karaa ujeedada Jamhuuriya.
DHAARTA AY MAREEN XUBNAHA KOMISHANKU
Subxaanalaa! Waar ninka ku dhaartay ILAAHAY, iyo inu daacad u noqdo diinta islaamka, dalkiisa, iyo dadkiisaba waxa lagu eedeeyaaba waa danbi. Intaas qofka ku dhaarta ee aaminsan haddii u dhaartaasi fulinwaayo in u kufriyay oo ifka iyo aakhiraba hoog korkiisa yahay waxa dhaartaas lagu dhiliilaaba ma jirto.
Qoraalku maaha in run iyo beenba la rog rogo. Ilaha warfaafintu waa indhaha umada oo waxay ku baraarujiyaan umada wixii danhooda iyo ta dalkaba. Haseahaate, Jamhuuriya way ka fogtahay ujeedooyinka Ilaha Warfaafinta. Waa jariidad had iyo jeerba taageerta dhinac siyaasada bidixda oo inta badan ah af hayeenka iyo makarafoonka xisbiga Kulmiye.
Dhaartan oo ay isugu yimaadeen muxaafid iyo muccaridba iyagoo ku faraxsan goosha la gaadhay, kana raaliya qaabka dhaarta ayay Jamhuuriyana ku eedaynsaa madaxda mucaaridka sidayna uga hadlin qaabka dhaarta. Waxan soo marnay safar dheer oo an ilaa hadda dhamaanin intiisii adkaydna hadhay. Warfaafintu waxay ahayd in ay hagto ummada oo ay tusto dariiqa toosan iyo siday u mari lahaayeen ee maaha in wax walba xumaan ka raadiyso sida Jamhuuriya.
Dhaartaas fulinteedo waxay u taala Xubnaha Komishanka. Guusha Xubnahaasi iyo fulinta dhaartaasi waxay ku xidhantahay dadnimada, islaanimada, iyo xeer ilaalinta Xubnahaas. Xubnaasi waa in ay oggadaan in diirada ilaahay iyo ta umaduba saarantahy korkooda goor walba oo la sugayo oo loo hanqal taagayo shaqada ay qaban doonaan iyo in ay u hogaansanaad dhaartaas ay mareen. Umadu ha u baridu ilaahay in u Xubnahaas waafajiyo wixii khair ugu jiro umada iyo iyagaba. AMEEEEEEEEEEEEEN.
This entry was posted on October 30, 2009 at 10:03 am	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.